Soo dejisan Asana 4.8.6 – Vessoft
Soo dejisan Asana
Ku rakib via Google Play
Nidaamka Operation: Android
Ašaną – software ah si ay u maareeyaan hawlaha iyo mashaariicda kooxda. Software waxuu si ay u abuuraan mashaariic iyo hawlo, ku dar iyaga isticmaala, ku soo lifaaq faylasha, u gudbiyaan xaq u leedahay in la maareeyo, dhigay taariikhda aad dhaleysid, reserved mudnaanta iwm Ašaną kuu ogolaanayaa inaad boostada a comment on qabyada ah oo awood u isticmaala kale si aad u hesho Macluumaad updated on horumarka hawsha. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay wadaagaan mashruuc oo la saaxiibo iyada oo codsiyo kala duwan oo lagu rakibay qalabka.
Waxay abuurtaa oo maamusha mashruucyada
.Wadashaqayntaas La web-codsiga
Kartida in aad ku darto files of noocyo kala duwan
Meeshay ee taariikhda dhalidda ee hawsha final
Comments on Asana:
Asana Software la xiriira:
Qaar kale waxay Software ayaa loo jecel yahay in ay dhegeystaan ​​idaacadaha jecel aad ka soo adduunka oo leh awood uu ku qabsado Dooratay muusikada oo user.
Qaar kale waxay Codsiga rasmi ah si aad u eegto macluumaadka encyclopedia ee dunida ugu weyn. Software ayaa awood u siineysaa inay akhriyaan maqaalada ku qoran luqado kala duwan oo ay wadaagaan macluumaadka laga helay iyada oo codsiyada kale.
العربية, English, Українська, Français... Google Translate 3.2.0
Qaar kale waxay Turjubaankii ayaa loo jecel yahay oo taageero ka helaya luqado kala duwan ka adeega Google. Software ayaa awood u leh inuu turjumo qoraal ka soo sawiro iyo sidoo kale talooyin ku qoray oo cod.
العربية, English, Українська, Français... Amazon 6.4.0.100
Qaar kale waxay Codsiga waxaa la set oo ah content kala duwan oo alaab ka adeegga caanka ah Amazon. Software ayaa awood u download xorta ah ee codsiyada iyo kulamo badan.
العربية, English, Українська, Français... Shazam 5.11.0
Qaar kale waxay Tool in la aqoonsado kuwan raadkaygay music iyo fanaaniinta. Software wuxuu isticmaalaa makarafoon si ay u qoraan ilo dhawaaqa iyo is barbar jajabkii ka luuq la database ee codsiga.
العربية, English, Українська, Français... 9Apps 3.0.1.8
Qaar kale waxay Adeegga codsiga caan ah oo la kala duwan ee wax soo saarka ee qaybaha kala duwan diyaar u download iyo updates automatic in qoraalkii ugu dambeeyey.
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... eBay 2.3.0.25
Qaar kale waxay Software si loo maareeyo adeegga ugu caansan u soo iibinta iyo sale of alaabooyin kala duwan. Software wuxuu isticmaalaa nidaam ku haboon search badeecadaha iyo adeegyada kala qaybsan qaybaha badan.
English, Français, Español, Deutsch... Amazon Underground 6.7.1.200
Qaar kale waxay dukaanka caanka ah app oo taageera waxyaabaha badan oo kala duwan iyo suurtagalnimada in ay soo bixi codsiyada bixiyo inta lagu guda jiro waqti kooban.
English, Français, Español, Deutsch... AccuWeather 4.1
Qaar kale waxay Cimilada ticker caanka la saadaasha sax ah. Software ayaa awood u si ay ula socdaan isbedelka la soo dhaafay ee cimilada iyo muddo-dheer saadaasha ah qaab jaantus.
العربية, English, Українська, Français... Vimeo 1.1.42
Qaar kale waxay Codsiga rasmi ah ka adeega oo caan ah si aad u eegto video content kala duwan. Software wuxuu taageeraa kala duwan oo ka mid ah qalabka ay u saxaa ah video iyo Upload xiga in shabakadda.
Chat Isgaarsiinta Voice Software Popular in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah oo ay ka dhigi cod ama video soo wacay. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan files iyo waxaa ka mid ah set badan oo smileys.
Internet Programka sirta software The heer sare ah si loo xaliyo dhibaatooyinka helitaanka goobo hor istaagay. software ayaa si toos ah doorto gobolka ee la xidhiidha si mug leh.
Network Bulshada Xawaaraha sare oo kale MFT macmiilka rasmiga ah ee network VK bulshada. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab si loo hubiyo inay joogsatay oo raaxo leh oo ka tirsan shabakadda.
English, Українська, Deutsch, Русский... Photo Grid 5.06
Photo Software in la abuuro collages oo tayo sare leh oo muujinaya in slide. Software ka kooban qalab iyo saamaynta u dil oo nadiif ah mashaariic kala duwan oo badan.
العربية, English, Українська, Français... Mobdro 2.0.4
Streaming video software The si aad u aragto video ku saabsan sii daayaa maaddooyin kala duwan oo dunida ku baahsan. software The awood u tahay in la helo durdurrada video on luqadood ee la doortay by user ah.
WPS Office 9.5.3.2273